ပန်းပု ဂလက်ဆီ - ဝီကီပီးဒီးယား
00° 47′ 33″
ပန်းပု ဂလက်ဆီ (NGC 253) သည် ပန်းပုဆရာ ကြယ်စုတန်းမှ အလတ်အလတ်တန်း ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီဖြစ်ပြီး ကြယ်တာရာများ မွေးဖွားနေသော ဂလက်ဆီတစ်ခုဖြစ်သည်။နက်ဗျူလာ တောက်ပမှုအား တိုင်းတာသောနည်းလမ်းဖြင့် ခန့်မှန်းရာ အကွာအဝေးသည် အလင်းနှစ် ၁၀.၈၉ မီလီယံ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းအား ၁၇၈၃ ခုနှစ်တွင် ကာရိုလင်း ဟာရှယ်က ဥက္ကာခဲများအား လိုက်ရှာနေစဉ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ဝက် ကြာသော် ဂျွန် ဟာရှယ်မှ ယင်းဂလက်ဆီအား ၁၈ လက်မအရှည် တယ်လီစကုပ်ဖြင့် ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်မှ လှမ်းကြည့်ရာ ပုံရိပ်များကို အသေးစိတ် မြင်ခဲ့ရသည်။ NGC 253 သည် အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီပြီးလျင် ကောင်းကင်ယံ၌ ရှုမြင်ရ အလွယ်ကူဆုံး ဂယ်လက်ဆီများထဲမှ တစ်ခုဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for NGC 253။ 2006-11-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Rekola, R. (2005). "Distance to NGC 253 based on the planetary nebula luminosity function". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 361 (1): 330–336. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09166.x. Bibcode: 2005MNRAS.361..330R.
↑ NGC 253: Dusty Island Universe။ Astronomy Picture of the Day။ NASA (2006-04-21)။
↑ Dreyer, J. L. E. (1888). "A New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, being the Catalogue of the late Sir John F.W. Herschel, Bart., revised, corrected, and enlarged". Memoirs of the Royal Astronomical Society 49: 1–237. Bibcode: 1888MmRAS..49....1D.
↑ Burnham၊ Robert (1978)။ Burnham's Celestial Handbook; An Observers Guide to the Universe Beyond the Solar System; Volume Three, Pavo Through Vulpecula။ Dover Publications, Inc.။ p. 1736။ ISBN 0-486-24065-7။
↑ HubbleSite NewsCenter။ Results for NGC 253။ 2007-04-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kepple၊ George Robert; Glen W. Sanner (1998)။ The Night Sky Observer's Guide။ 2။ Willmann-Bell, Inc.။ pp. 365, 371။ ISBN 0-943396-60-3။
ကိုဩဒိနိတ်: 00h 47m 33s, −25° 17′ 18″
ဤ ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီ ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်းပု_ဂလက်ဆီ&oldid=722120" မှ ရယူရန်
ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီ ဆောင်းပါးတိုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။